मलेसियामा दिल साट्नेहरू - नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन - कान्तिपुर समाचार
मलेसियाको ग्यान्टिङमा थुप्रै नेपालीहरू छन्, जो दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाल नर्फकी बसेका छन् । तीमध्ये इन्डोनेसियन केटीसँग लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या पनि दर्जनभन्दा धेरै छ ।
झन्डै १४ वर्षयता स्वेदश नर्फकी यहीको पहाडी थुम्कोको माटो खोस्रिरहेका उनी बासको टेकोमा फ्लेक्स प्रिन्टले बारेर सानो कटेरोजस्तो घर बनाएर बसेका छन् । त्यही नजिकै उनले एक जना चिनियाँका २ हेक्टर जमिन वार्षिक पाँच हजार रिंगिट अर्थात् करिब एक लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा भाडामा लिएका छन् । जहाँ उनी मौसमअनुसार खुर्सानी र सिमी फलाउँछन् । मौसमको जस्तै खेतीको पनि केही भर हुन्न भन्ने कथ्य सुनाउँदै राजन केही बेर थकथकाए । कारण के परेछ भने, केही दिनअघि मात्रै परेको ठूलो झरीेपछि उनको सिमी बारीभरि कीराहरू सलबलाएछन् र सप्पै सिमीको बोट नासिएछन् । उनले सानो स्वरमा भने, ‘झन्डै दुई/तीन हजार रिंगिटको लगानीखेर गयो ।’
वर्षौंसम्म इन्डोनेसियन केटीसँग घरजम गरेर बसे पनि नेपालीहरू हत्तपत्ती बच्चा भने जन्माइहाल्दैनन् । धेरैको बुझाइ के छ भने, बच्चा जन्मिएपछि तिनकै मायाले नेपाल फर्किन सकिँदैन । ग्यान्टिङका केही नेपालीका अनुसार बच्चा जन्मिएपछि पत्नीको पछि लागेर इन्डोनेसिया पसेर उतै हराउने नेपाली पनि छन् । राजनले डिन्डातिर देखाउँदै भने, ‘हामी त सँगै बस्ने मात्रै हो । बच्चा त नपाउनै है ।’
नुवाकोट किन्ताङका घले थरका एक तन्नेरी पनि राजनकै घर छेउमा भेटिए । सन् २००५ मा मलेसिया छिरेयता उनी घर फर्केका छैनन् । मलेसिया बसाइका एक दर्जन वर्षहरूमा पछिल्ला केही वर्षमा भने उनी पनि एउटी इन्डोनेसियन केटीसँग घरजम गरेर बसेका छन् । एक लाख बीस हजार रुपैयाँ दलालको हातमा सुम्पेर फर्निचर कम्पनीका काम गर्न भनेर मलेसिया छिरेका उनी भनेजस्तो काम र तलब नपाइने भएपछि कम्पनी छोडेर भागे । त्यसपछि गैरकानुनी कामदारको हैसियतका कहिले कहाँ त कहिले कहाँ लुक्दै भाग्दै उनी ग्यान्टिङ आइपुगेका हुन् ।
ग्यान्टिङ आएको एकाध वर्ष अरूकै तरकारी बारीमा काम गरेका घले अहिले आफैंले तीन हेक्टर जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । जिरे खुर्सानी र भेडे खुर्सानी फलाइरहेका उनले आफ्नो नाम छाप्न र फोटो खिच्न नहुने तर्क सुनाउँदै भने, ‘घरतिरकाले थाहा पाए आपत् पार्छन् ।’ त्यसो त घले इन्डोनेसियन केटीसँग बस्नुको आफ्नै बाध्यता सुनाउँछन् । उनले भने, ‘एक्लै बस्दा सबै काम नभ्याइने, चुलबुल मन सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले मात्रै हो ।’ घले प्रत्येक महिनाजसो दुई छोरा हुर्काएर बसेकी पत्नीका लागि नेपालमा पैसा पनि पठाउँछन् । दिन बिराएर फोन पनि गर्छन् । अनि भन्छन्, ‘गाउँमा बसे यत्तिको कमाइ पनि कहाँ हुन्थ्यो ? यत्तिको कमाइ नभए छोराहरूकसरी पढ्थे ?’
ग्यान्टिङमा इन्डोनेसियन केटीसँग घरजम गरेर बस्ने धेरैजसो नेपालीहरूको अनौठो कथा व्यथा छ । त्यस्तो व्यथामा सबैभन्दा चर्को भइदिन्छ, शारीरिक सम्बन्धपछिको विकासक्रम । नाम उल्लेख नर्गने सर्तमा केही नेपालीले सुनाएका घटना अनौठा थिए । एक नेपालीका अनुसार इन्डोनेसियनसँग घरजम गरेर कृषि कर्म गर्ने धेरैजसो अवैध कामदारहरू परिवार नियोजनका अस्थायी र स्थायी कुनै पनि साधन प्रयोग गर्दैनन् । न त्यसबारे उनीहरू जानकार छन्, न सहर झरेर त्यस्ता साधन किन्न नै सक्छन् । गैरकानुनी हैसियत भएकै कारण अस्थायी साधन किन्न धेरैजसो नेपाली बजार झर्न डराउँछन् ।
घलेका अनुसार गर्भ रहेपछि विभिन्न एजेन्टमार्फत लुकीछिपी क्वालालम्पुरका क्लिनिकमा पुगेर गर्भपतन गर्दा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ । प्रत्येकचोटि गर्भपतन गर्दा करिब ४ देखि पाँच सय रिंगिट खर्चिनुपर्छ । यसरी कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा गर्भपतनमा खर्चिदा उनीहरू आर्थिक रूपमा त समस्या परेका छन् नै एजेन्टको भरमा गैरकानुनी काम गर्दा कानुनी झमेलामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । एक नेपालीले आफूले घरजम गर्ने इन्डोनेसियन केटीको चारपटकसम्म गर्भपतन गरेको सुनाए । तिनले भने, ‘गर्भपतनपछि केटीहरूलाई स्याहार्दैमा केही दिन जान्छ । पैसा त नासिन्छ नै, काम गर्न पनि पाइँदैन ।’
दलालको पासोमा परेर, भनेजस्तो काम नपाएर र कम्पनी छोडेर गैरकानुनी कामदार भएका धेरैजसोको व्यथा राजन र घलेको जस्तै घनचक्करमा अल्झिएको छ । सात वर्षअघि धादिङका डिलकुमार तामाङ एक लाख ८० हजार रुपैयाँ दलाललाई बुझाएर मलेसिया आएका थिए, क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्ने भन्दै । ओभरटाइमबाहेक नौ सय रिंगिट तलब पाइने दलालको वाचा झूटो भएको थाहा पाएपछि उनी कम्पनी छाडेर अनेक ठाउँं भांैतारिंदै हिँडे । केही वर्ष भाग्दै र लुक्दै अनेक ठाउँमा काम गरेपछि उनी साढे दुई वर्षअघि ग्यान्टिङ आइपुगे । ४ हेक्टर जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती थालेका डिल्ली अहिले डेढ वर्ष जेठी इन्डोनेसियन केटी सुकीसँग घरजममा छन् । मासिक तीसदेखि ३५ हजार औसतमा कमाउने डिल्ली आफ्नो कमाइबाट सन्तुष्ट छन् । तर उनको पीरको पारो भने त्यतिबेला उक्लिन्छ, जतिबेला उनकी घरवाली सुकी इन्डोनेसिया नै जाम भनेर करकर गर्छे ।
धेरै नेपालीलाई इन्डोनेसियन केटीको पछि लागेर उता गइयो भनेर फर्केर आउन सकिँदैन भन्ने डर लाग्छ । डिल्लीले भने, ‘खोलापारि गइयो भने वारि आउन मुस्किल छ ।’ ग्यान्टिङका डिल्लीहरू इन्डोनेसियालाई खोलापारि भन्छन् । इलाम घर बताउने चोक्ता तामाङ पनि राजन र डिल्लीजस्तै झूटा वाचामा फसेर अवैध कामदार भएपछि ग्यान्टिङ आएका हुन् । उमेरले दुई वर्ष जेठी डिना नामकी इन्डोनेसियनसँग दुई वर्षयता घरजम गरेर बसेका चोक्तासँग आफ्नै हैरानीको कथा छ । तीन सन्तान हुर्काउनुको दु:खले उनी ग्यान्टिङको पहाड खोस्रिरहेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमै भनेजस्तो भाको भए, यहाँ गैरकानुनी भएर कसले काम गथ्र्यो र ।’
एक जना चिनियाँको ३ हेक्टर जमिन वार्षिक १७ सय रिंगिट तिर्ने गरी भाडामा लिएका चोक्ता अहिले सिमी र खुर्सानी फलाइरहेका छन् । डिना र उनी सँगसँगै काम गर्छन्, सँगै आएर खाना पकाएर खान्छन् र आम्दानीको हिस्सा पनि आधा–आधा बाँडेर लिन्छन । यसरी उनी औसतमा मासिक तीसदेखि पैंतीस हजार कमाउँछन् । खाने, बस्ने र मोबाइल खर्च कटाएर हुने बचतको केही हिस्सा छोराछोरीको पढाइ खर्च भन्दै घर पठाउँछन् ।
इन्डोनेसियन केटीसँग बिहे गरेका धेरैजसो नेपालीको अनौठो जीवनशैली छ । एउटै पहाडी थुम्कोमा कैयौं ससाना टहरामा पुग्दा नेपालकै कुनै गाउँ पुगेजस्तो लाग्छ । धेरैजसो जनजाति मूलका नेपालीहरू एकआपसमा आफ्नो मातृभाषा र नेपाली भाषामा कुरा गर्छन् अनि घरवालीसँग भने मलायलम भाषामा कुरा गर्छन् । राजनकी घरवाली डिन्डा त धेरथोर नेपाली भाषा पनि बुझ्छिन् । उनले हाँस्दै सुनाए, ‘घरबाट आमाले फोन गर्दा डिन्डाले नमस्ते भन्न जानीसकेकी छन् ।’
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियामा ४ लाख ८५ हजार नेपाली कामदारहरू रहेको सरकारी रेकर्डमा छ । तर दूतावासका अनुसार गैरकानुनी हैसियतका रहेका नेपालीहरू पनि जोडने भने भने यो संख्या करिब सात लाख पुग्छ । जसमा मलेसियाका विभिन्न पहाडी भूभागका पशुपालन र तरकारी खेती गरेर वर्षौदेखि लुकीछिपी काम गरिरहेका राजन, चोक्ता र घलेजस्ता कामदारहरू पर्छन् । नेपाली कामदारको सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको मलेसियाको चमकधमकमा उनीहरूको कथा कतै हराइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मलेसियाबाट ६८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल भित्रिने यस्तो रकममा राजनजस्ता गैरकानुनी कामदारको दु:ख र हैरानीको कथा मिसिएको छ ।
एक दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वदेश नै नफर्की उतै हराइरहेका नेपालीहरूलाई घर कहिले फर्किने त भन्ने प्रश्नमा एउटै जवाफ हुन्छ, ‘सोचेजस्तो भएपछि फर्किम्ला भनेको ।’ तर सोचेजस्तो कहिले हुने हो ? भनेजस्तो कहिले पुग्ने हो ? कसैलाई थाहा छैन । त्यसो त अवैधानिक हैसियतमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउने भन्दै सरकारले ल्याउने बेलाबखत कार्यक्रमबारे पनि दुर्गम मानिने ठाउँमा रहेका नेपाली कामदारले थाहा पत्तो पाउँदैनन् । थाहा पाएकाले पनि आवश्यक कागजात जुटाउन सक्दैनन् ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७४ ११:११
एनआरएनएको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु
आश्विन २८, २०७४ होम कार्की
काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । काठमाडौंको होटल हयातमा एनआरएनएको विश्व सम्मेलन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन् । उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
काठमाडौंको होटल हयातमा एनआरएनएको विश्व सम्मेलन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन् । उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय आएको बताइन् । 'संविधान जारी भएपछि नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्दैछ, त्यसको साझेदार एनआरएनए बन्नुपर्छ', राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनले उल्लेख गरिन् ।
नेपालको समृद्धिले मात्र विदेशमा रहेका नेपालीको शिर उचाइमा पुर्‍याउने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्प र बाढीपहिरोपछि राहत, उद्धार एवं पुनःनिर्माणमा एनआरएनएले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको विकासमा एनआरएनएको विशेष भूमिका हुने अपेक्षा गरेको सुनाए । परराष्ट्रमन्त्री महराले भने,'विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल विकासको ऊर्जा बन्ने विश्वास छ ।'
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले देश समृद्ध नभए व्यक्तिगत सफलताको अर्थ नरहने भएकाले आफूहरुले राष्ट्र विकासमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेले ७७ देशमा ७० हजार नेपाली सदस्य रहेको जानकारी दिँदै सम्मेलनले चयन गर्ने नयाँ नेतृत्वले संगठन अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मेलन अन्तर्गत भोलि बन्दसत्र र पर्सि नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने एनआएएनएले जनाएको छ । आगामी नेतृत्वका लागि भवन भट्ट, जमुना गुरुङ र टिबी कार्कीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुबाट करिब एक हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।